Shirkii Isimada Reer Tanadland Iyo Habar-majeerteen Uga Socdey Magaalada Garoowe Oo Lagu Guuldaraystay – Codka Qaranka Tanadland
Shirkii Isimada Reer Tanadland Iyo Habar-majeerteen Uga Socdey Magaalada Garoowe Oo Lagu Guuldaraystay
Sidaad la socotaan shirkii la sugahayey mudada 6-da sanaddood ah ee ay isimada reer Tanadland ay gogoshiisa dhigeen magaalada magaalada Garoowe, oo la filayey inay ku kulmaan isimada reer Tanadland iyo Habar-majeerteen Waa u fashilmay. Sababta oo ah intuusan shirkaasi bilaaban ayaa la marin-habaabiyey si’uu u fashilmo. Hadaba maqaal kaan waxaan ku qaadaadhigayaa cida u sababta ah in uu shir kaasi fashilmo iyo waxa xigi doona.
Sidaad ogsoontihiin mudo 3 todobaad ku dhow magaalada Garoowe wuxuu shir uga socdey isimada reer Tanadland iyo beesha Habar-majeerteen isimadooda. Shirkaas waqtidhumiska ah ayaa wuxuu soo gabagaboobey maalinkii shalay ahaa oo ay taariikdu ahayd (17/07/2017). Ergada shirkaas ka qaybgashayna waxay soo saareer qaraar ah inay shirka u rag badsanayaan oo u shirku dib u furmidoono (25/07/2017). Waxaana shirka ergada Habar-majeerteen ee ka maqan loo qabtay mudo 7 beri ah inay shirka ay uga soo qayb galaan. Shirkaan intii uu socdey iyo maalintii uu furmay toona kama aanan hadlin. Walow aan maqaal ka qoray maalintii ergooyinka gobalada Bari iyo Mudug ee reer Tanadland ay gaareen magaalada Garoowe, oo ay taariikhdu ahayd (11/05/2017). Guji Halkan
Sababtuna waxa weeye waxaan aaminsanahay inay dadka reer Tanadland 80% oo aan anigu ku jiro ay aaminsanyihiin, in sida keliya oo reer tanadland ay ku heli karaan danta ay leeyihiin ay tahay qori caaraddiis. Dadka reer Tanadland waxa keliya oo ay ku qanci karaan anaga oo Habar-majeerteen inta dagaal la gala ku cidibtira, oo saqiirkooda ugu danbeeya surka faas uga goyna. Ama ay iyagu dagaal nooga adkaadaan oo ay naga taqalusaan. Xaaladdu hada meesha ay marayso suuragal maaha in Habar-majeerteen iyo reer Tanadland inay wax-wadaqaybsi ku heshiiyaan. Ergada reer Tanadland ee shirka fashilmay waqtigooda ku lumiyeyna, ma’ay xuma hada inay garawsadaan aragtida tolkood badankiisu ay qabaan inay sax tahay.
Run ahaantii xubno badan oo ka mid ah ergada reer Tanadland shirka uga qaybgalay, waxay sheegeen in isimada beesha Habar-majeerteen oo ka midaysan fashilinta shirka. Qaabka ay shirka u fashiliyeen ay tahay qaab xeeladaysan. Oo markii hore ee Isimada reer Tanadland ay la kulmeen kuligood ay qoreen waraaqo ay ku taageerayaan, fulinta heshiiskii wax-wadaqaybsiga ee sanadkii 2011 -ka dhacay. Dhanka kalana si’ay ergada reer Tanadland ay uga caraysiiyaan oo uu shirku u fashilmo. Waxay shirkii Garoowe markii uu furmay ay soo fariisiyeen Isimo harti ah oo aysan qadiyadda laga hadlahayo waxba ka quseyn.
Arinta kale oo dadka reer Tanadland ay aadka ula yaabanyihiin waxa weeye. Hadii dhawr nabaddoon oo u ku jiro nabadoon (Burhaan Muuse Yuusuf) oo ah nabaddoonka jifida (Cismaan Maxamuud), oo horay u sixiixay warqado ay ku ayidayaan hanaanka wax-wadaqaybsiga reer Tanadland iyo Habar-majeerteen ee gobalada Bari, Nugaal iyo Mudug. Lana wada ogyahay mawqifkooda, maxaytahay sababta shirka 7 maalmood loogu hakiyey?. Sowse munaasib maysan ahayn in isimada maqan ay wakiil ka noqdaan isimada ay isku beesha yihiin ee jooga.
Taas waxaa ka sii daran waxa laga wada hadlahayaa maaha oo keliya wax-wadaqaybsi ku salaysan, in maamul xalaal oo ay ku yeeshaan reer Tanadland iyo Habar-majeerteen xildhibaano iyo xilal isle’eg.
Tuulooyinka beenta ah ee gobalada lagu magacaabay waa in laysku dheelitiraa oo 2 gobol oo been ah marka ay Habar-majeerteen wax ku qaadato anaguna aanu 2 gobol wax ku qaadanaa. Gobalada 3 da ah ee wax-qaybsigooda hada loo fadhiyo oo ah (Bari), (Nugaal) iyo (Mudug) marka labo waaxood oo isle’eg loo qaybsado. Markaas Habar-majeerteen yibraha iyo midgaha la dega qaybtooda wax ha’ay ka siiyaan.
Metalan reerka (Reer Saalax) la yiraahdo oo magaalada Garoowe dhawrka qoys ay ka degaan, beesha Habar-majeerteen-na gabdhaha uga guursada Daarood baanu la dhalanay oo jeberti baanu nahay. Anaga (Reer Saalax) gabdhahayaga ma’ay geeyaan nagamana ay guursadaan maadaama ay yihiin dad yibro ah oo isqarinahaya. Marka maadaama yibraha (Reer Saalax) iyo Habar-majeerteen ay kala guursadaan anagu (Reer Saalax) waxaanu u aragnaa yibro Habar-majeerteen ay leeyihiin. Marka aanu Habar-majeerteen laynaynana dabcan yibir (Reer Saalax) ah meeshaanu ku aragno waanu ku shabaaxaynaa oo waxaanu u dilaynaa, yibirku waa yibir cadowgiina u adeegahaya. Marka Habar-majeerteen haday yibrahooda ay wax la rabaan waa’inay qaybtooda ay saamiga u helaan ay wax ka siiyaan. Laakiin marnaba anagu aqbalimayno in la yiraahdo dhawr qoys oo Habar-majeerteen ku tirsan si gooniya wax ha loo siiyo. Iyada oo ay u jeedadu tahay in qayb sadbursi ah oo siyaado ah la helo.
Dadka Reer Tanadland Maxaa La Gudboon Mar Hadii Uu Shirkii Wax-wadaqaybsigu Uu Bur-buray?
Ugu horayn horta shirka Garoowe bur-buriddiisa anigu waxaan u arkaa inay dani inoogu jirto. Sababta oo ah waxaan ku jiraa dad badan oo reer Tanadland ah oo aaminsan, in dagaal lagu kala baxo oo dhexmara Habar-majeerteen iyo reer Tanadland uu lama huraan yahay. Beesha Habar-majeerteen sababta ay odayaasha beesha Harti ee raaciyadda u ah beesha isaaq ay shirka ugu soo kaxaysteena waxay ka marag kacaysaa sida ay u baqayaan. Ergada reer Tanadland qaladka ugu weyn ee ay sameeyeen waxay ahayd ogolaanshaha ay ogolaadeen inay la fariistaan odayaal beesha Harti ah oo qadiyadda shirka looga hadlahayo aysan waxba ka qusayn. Habar-majeerteen oo wixii ay galabsatay aan laga jaaseyn dagaalna aynaan uga adkaan see ayey nooga suurowdaa inaynu la heshiino?
Marka hada ah hubku waa markii uu ugu raqiisanaa tan iyo markii ay burburtay dowladdii kacaanka ahayd. Gobalka mudug qoriga dabajeexa ah wuxuu ka joogaa $9000 ilaa 12000. Qoriga Aakaha ahna hada bastoolada ayaa ka qaalisan oo waxaa la kala siistaa $300 ilaa $400. Hubka waaweyna isaguna waa xaraash oo labadii sanadood ee ugu danbeeyey marba marka ka danbaysa waa’ay soo jabahayeen. Mudo haatan 7 bilood laga joogo ayaa beelaha reer Tanadland ee dega gobalada Bari iyo Nugaal, Doon hub ah waxay kala soo degeen dekeda magaalada (Caris) oo u dhexaysa Banadrbayla iyo Isku-shuban. Doontaas oo hub iyo rasaas wadanka yeman laga soo iibiyey. Hubka iyo rasaas taasna waxaa lagu soo iibiyey 10 jibaan qiime ka jaban qiimaha la kala siisto hubka koonfurta Soomaaliya. Hadaba shirka Garoowe oo hada fashilmay lagu soo beegay waqti dadka reer Tanadland ay dagaal u diyaargaroobeen. Waxaa lays weydiinayaa qaabka ugu haboon ee dagaalkaas looga guul gaarikaro.
Anigu Hadaan Ciidamada Reer Tanadland Aan Abaanduule U Ahay Sidaan Tolkay U Dagaal Gelin Lahaa?
Ciidamad ree Tanadland waxaan u kala qaybin lahaa 3 aag iyo 3 qaybood. Hogaanka ciidamad Tanadland ee gobalka Nugaal. Hogaanka ciidamada Tanadland ee gobalka Bari. Hogaanka ciidamad Tanadland ee aaga Mudug. Beesha reer (Cali Muumin) ciidamadooda waxaan ku soo darahayaa ciidamada aaga Mudu. Gaashaanqaadka reer Tanadland uma ay baahna tababar iyo wacyigelin badan. Laakiin unug, urur iyo guuto kasta xubin kast oo ka mid ah waa in uu ogsoonyahay qaabka hawlgelinta iyo xeeladdaha dagaalka la rabo in loo fuliyo. Askari kasta oo ciidamad reer Tanadland ka mid ahi waa in uu ku talogalaa. In si aynu himiladeena u gaarno inaynu ka cidibtiraa beesha Habarmajeerteen Gobalada Nugaal, Mudug iyo Bari. Ciidamada 3 aag oo tiro ahaan isle’eg waxaan ku amrayaa in cadoga ay laayaan ay madaxa ka goostaan oo ay gaadiidka dagaalka ay ku sharaxdaan. Maadaama dagaalkaani uu yahay halgan dib loogu soo noolaynayo boqortooyadii Tanadland, Dagaalku marka uu dhamaado oo cadowga la cidibtiro. Waxaa la tirinayaa ciidamada 3 -da aag madaxyada cadowga ee ay haystaan. Waxaana boqorka Tanadland loo dooranayaa sadexda ciidan ciidanka jabka ugu weyn cadowga u geystey, oo madaxyada ugu badan cadowga ka jaray.
Weerarka waqtiga la qaadahayo waxaan ka dhigahayaa goor habeen ah. Sadexda ciidan na waxay cadowga ku duulahayaan isku saacad iyo isku daqiiqad taasoo sahleysa in awooda cadowga si deg-deg ah loo wiiqo. Sadexda ciidan waxaan u sii kala qaybinahayaa unugyo 300 oo nin ilaa 800 oo nin ka kooban, oo degaamo gaar ah cadowga ka sifeeya. Duulaanka mirta ah ee ugu horeeyana waxaan ku koobilahaa gobalada Mudug iyo Nugaal.
Ciidamada aaga mudug waajib koodu waxa weeye inay 3 tuulo oo u dhexeeya magaalada Garoowe iyo magaalada Gaalkacyo, iyo xaafadda Israac waqooyigeeda ay isku amin weeraraan. Oo saqiir iyo kabiir xataa dumarkooda wixii ay qabtaan ay gowracaan. Isla habeenimadaasna inta aanu waagu beryin ay magaalada Garoowe simin cayiman oo galaan. Isimada hartiga iyo siyaasiyiintooda iyaga cinqaab gooniya ayaan u diyaarin lahaa, oo lugaha iyo gacmaha intaan ka jaro ayaan iska siideynlahaa, si ay caloolyow, murugo iyo gunimo ay qtigooda inta ka hartay ay ugu dhamaystaan.
Ciidamada reer Tanadland ee aaga Nugaal waxaan u xilsaari lahaa, in magaalada Garoowe iyo Eyl tuulooyinka u dhexeeya ay isla habeen kaas ay ka sifeeyaan. Oo ay madaxa ka guraan wixii Habar-majeerteen ah oo ay arkaan. Aagagga mahbarku ay magaalada Garoowe ka degaana ay soo galaan inta aanu waagu beryin amin cayiman. Magaalada markay isla habeenimada qabsadaan cidamada aagagga Nugaal iyo Mudug, Jifada reer Gar-xiir ee (Nuur Axmed) waxaan ahayn oo harti ah waa in intaanu waagu beryin madaxa laga guraa. Dumarka Habar-majeerteen ee carabka dheerna waa in inta la qaawiyo kuligood maxaabiis ahaan loo xir-xiraa. Iyada oo ay ujeedadu tahay marka uu dagaalku dhamaado in si qasab ah loogu guuriyo qolooyinka 4.5 ka ee aynu deriska nahay.
Ciidamada aaga Bari ee beelaha (Maxamuud Cali) iyo (Suxure) waajibaad koodu waxa weeye, marka ugu horaysa in beesha (Suxure) lafaha ka dega magaalada iyo degaanka Xaafuun. Ay ka soo guuraan oo ay soo degaan degaanka (Iskushuban). Habeenka uu dagaalku bilodana degaamada (Iskushuban) iyo (Bandarbayla) laga sifeeyo wax aan ahayn, reer Tanadland, Jaaji iyo Tumaal. Dabeetana aroor hore ay ka fariistaan magaalada Qardho daanta koofur-bari iyo wadada Bosaso aada.
Arintu markay halkaas marayso oo cadowga xogiisii la wiiqay, sadexdii ciidan oo reer Tanadland na ay car-cartoodii qabaaan oo aysan waxba gaarin. Ayaan labada ciidan oo qabsaday Garoowe aan isla subixiiba ka soo saarahayaa. Sababta oo ah muhiimaddayda koobaad inaan dhul qabsado maaha ee waa inaan cadowga gumaado. Magaalada Qardho inta aanan weerarin waa’an hareeraynayaa. Markaan hubsado magaalada wax ka bixikaraa in aanay jirin. Ayaan hareeraha waxaan ka gelinayaa rag aan waabasho aqoon. Qardho waxaan ka samynayaa wax ay ku cibro qaataan Habar-majeerteen wixii seeftayadu aysan weli leefin oo aanaan surka ka jarin. Reer Qardho waxaanu dagaalka ku layno maahane intooda kale silsiladaha adoonta ayaanu ku xir-xiraynaa oo waanu adoonsanaynaa.
Ciidamada Tanadland oo ah rag uu dhiigu ku garooray, asee aan weligood dagaal looga adkaanin oo godob xun ka tirsanaya gunta habar-majeerteen iyo wixii harti gaab-gaab ahba. Waxaan ku amrilahaa inay ku ciil baxaan oo ay hilibkooda gubaan saqiir iyo kabiir wixii ka soo hor baxa. Xataa haweeney reer Tanadland ah oo ilmo mahbar ah wadata marka la arko, waa in ilmaha inta laga qaado la bireeyaa am dab lagu ridaaa. Qardho markaan qabsano ciidamad waxaan siinayaa 12 saacadood oo nasasho ah. Maalinta xigtana waxaan dirahayaa sahan soo ogaada halka uu cadowgu isku urursanayo. Dabeed ciidnka xoogiisa 4 meelood 2 meelood waxaan ku soo celinayaa magaalada Garoowe. Inta kalana waxaan ku qabsanayaa magaalada Bosaso. Habar-majeerteen waxaan ku qaadayaa weeraro aan kala g’o lahayn oo joogto ah har iyo habeen. Inta aan cayayaanka Habar-majeerteen ka cidibtrirahayo.
Ol-olaha cidibtirka gunta Habar-majeerteen markaanu fulino. Waxaan isugu yeerahayaa shir kulmiya umadda reer Tanadland si loo doorto Boqorka geyiga Tanadland. Nin kaas oo noqon doona sidii ay balantu ahayd abaan-duulaha ciidanka jabka ugu weyn u geystey cadowga.
Cid kasta oo dagaalka muqadaska ah ciidamada geesiyiinta ah ee reer Tanadland ku hogaamisaba, waxaa hubanti ah in naagaha habar-majeerteen ee naagta calooljileecu u dilay loogu magacdaray aanu aaqiro u diridoono.